Vital Golf Swing Movement Brings Success│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
Vital Golf Swing လှုပ်ရှားမှုကအောင်မြင်မှုရရှိစေသည်
the ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ၎င်းသည်လက်နက်ကိုမှန်ကန်စွာမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်ဆိုသည့်အချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဂေါက်သီးလွှဲခြင်း၌အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုဖြစ်စေခဲ့သည်. ငါဂေါက်သီးကစားတယ် 18 နှစ်ပေါင်းများစွာငါတစ်ခါမှဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကျွမ်းကျင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲဖူးဘူး. ဒါပေမယ့်အခုတော့ကလပ်ဟာငါဘောလုံးကစားတဲ့အချိန်တိုင်းဘောလုံးကိုပေါ်လာတယ်။’ ‘သင်၏လက်များသည်ကျွန်ုပ်လက်ကိုမည်သို့စနစ်တကျအသုံးပြုရမည်ကိုအမှန်တကယ်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသောဂေါက်သီးလွှဲအကြောင်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ဖူးသည်, တ ဦး တည်းကဒီရိုးရှင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုကျွမ်းကျင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကခြားနားသောခြားနားချက်. ငါအစိုင်အခဲကြားရတာကိုနှစ်သက်တယ်’ အဆိုပါ clubhead ဘောလုံးကိုရိုက်အခါတိုင်းအသံ။’ ‘လက်နှင့်ပတ်သက်သောဂေါက်သီးလွှဲခြင်းအပေါ် Ben Hogan ၏အလွန်ကောင်းသည့်စာအုပ်တွင် reading supinating ဖတ်ရှုခြင်းကိုသတိရမိသည်’ သူဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဘယ်တော့မှမ. ဒီအရေးကြီးတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားရဲ့ဖော်ပြချက်ကကျွန်တော့်အတွက်အများကြီးပိုရှင်းပါတယ်. ငါဘယ်လိုဆန္ဒရှိငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနားလည်သဘောပေါက်ချင်ပါတယ်။’ your ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ဂေါက်သီးလွှဲစာအုပ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကူးယူသောအခါကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်စိုးရိမ်ခဲ့သည်ဟုပြောရမည်. ဒါပေမယ့်စာဖတ်ရတာအရမ်းလွယ်ကူတဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးကတော့ဂေါက်သီးလွှဲတာကိုပိုပြီးညှိဖို့အတွက်အခြားနည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ခါထပ်ခါပြန်ရှာတာပါပဲ။’ I ကျွန်ုပ်သည်ဂေါက်သီးကစားခြင်းကိုဘယ်တော့မှစနစ်တကျမလွှဲခဲ့မိကြောင်းအမြဲသိခဲ့သည်. ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည်ထိရောက်သောဂေါက်သီးလွှဲခြင်းကိုကျွမ်းကျင်သည်ဟုခံစားရပြီး၎င်းသည်မည်သို့ကြည့်ရှုရမည်၊ မည်သို့ခံစားရမည်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နိုင်သည်. အဲဒါဟာကျွန်တော့်စိတ်ထဲစွဲမှတ်သွားစေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။’ ball ဘောလုံးကိုညာဘက်သို့မှေးမှိန်သွားသည်ကိုကြည့်သည့်နေ့များသည်ထာဝရအဆုံးသတ်သွားသည်ဟုကျွန်ုပ်တကယ်ခံစားမိသည်. ကျွန်တော့်ရိုက်ချက်များကိုနောက်ထပ်ပျံသန်းစေသည့်ဂေါက်သီးလွှဲကိုကျွမ်းကျင်ပြီး ပို၍ တင်းကျပ်ခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာပင်. ငါဆယ်နှစ်ကျော်နှင့်အတူငါကစားခဲ့အုပ်စုတွင်အခြားသူများထံမှအံ့အားသင့်၏ဖမ်းဆီးရမိ၏စကားကိုနားထောငျသောအခါငါပို။ ပင်ပျော်စရာပါပဲ။’ ဤဆောင်းပါးသည်ကစားခဲ့သည့် ၀ မ်းသာအားရကစားသမားတစ် ဦး မှပေးပို့သောအီးမေးလ်မှဖြစ်သည် 18 သူကဘောလုံးကိုထိမှန်ဖို့တကယ့်ကိုထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းရှာမတွေ့ခင်နှစ်အနည်းငယ်က. Vital Golf Swing လှုပ်ရှားမှုကအောင်မြင်မှုရရှိစေသည်
Posted Articles Title : Vital Golf Swing လှုပ်ရှားမှုကအောင်မြင်မှုရရှိစေသည်
■Link To This Post (HTML code) : Vital Golf Swing လှုပ်ရှားမှုကအောင်မြင်မှုရရှိစေသည်
■Trackback URL : Vital Golf Swing လှုပ်ရှားမှုကအောင်မြင်မှုရရှိစေသည်
THE “မှော်” ဖြောင့်မတ်၏
အိုင်ထဲသို့ ထွက်၍ ငါးကြီးကြီးကိုဖမ်းယူပါ
ငွေ Lotto စနစ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – ကောင်းလားဆိုးလား?
The MLB လောင်းကစားလိုင်းကိုနားလည်ခြင်း
သေနတ် Safe ၏အရေးပါမှု
လာရီဂျွန်ဆင် : 2003 နေ့ပုံမူကြမ်း
la Fl'che Wallonne 2006 ရလဒ်များ
Ladainian Tomlinson : 2001 နေ့ပုံမူကြမ်း
ကလင်တန် Portis : 2002 နေ့ပုံမူကြမ်း
ပါဝါပုဂ္ဂိုလ်ရေး ‘ ကြီးမားတဲ့လက်နက်နှင့်အတူ
အိမ်တွင်း Sauna တွင်ရိုးရိုးအိမ်သုံးပစ္စည်းများ
လူတစ် ဦး သည်အိမ်၌ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ချွေးပေါင်းအိမ်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ကိရိယာများပါရှိသည်. ဤပစ္စည်းများသည်ကိုယ်ပိုင်ချွေးပေါင်းအိမ်တည်ဆောက်ရန်လွယ်ကူစေသည်. သူတို့ကဘယ်သူ့ကိုမဆိုသူတို့ခံစားမိသည့်အခါတိုင်း spa (သို့) အားကစားရုံသို့သွားစရာမလိုပဲမည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးကိုမဆိုခံစားခွင့်ရှိသည်. အဘယ်အရာကိုထက်ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်? ချွေးပေါက်များကိုအတွင်းအပြင်နှင့်အပြင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်. ချွေးပေါင်းအိမ်အတွက်ကောင်းသောနေရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်အနည်းငယ်သည်မြေအောက်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ဟင်းလင်းပြင်သို့မဟုတ်ကားဂိုဒေါင်. ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့်အတူအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ချွေးပေါင်းအိမ်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများအားလုံးနီးပါးပါရှိသည်. saunas အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည် – ရေနွေးငွေ့နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်. Steam Sauas များသည်ရေစိုခံ။ ကြမ်းခင်းလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်အပူမလွတ်နိုင်ပါ. လူတစ် ဦး သည်များသောအားဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင်မပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းတို့အားသူတို့ကိုယ်တိုင်ထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည်. အချို့သော oods များလွန်းသောကြောင့်သစ်သားကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သင့်သည်. မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်အေးမြသောသစ်သားသည်ချွေးပေါင်းအိမ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. Sauna အများစုသည်အရွယ်အစားကျိုးနွံစွာရှိသည်. ဒါကအကြောင်းကောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်. ပထမ ဦး စွာအသေးငယ်ဆုံးသောချွေးပေါင်းအိမ်သည်သေးငယ်လေလေအပူသည်အလွန်ကြီးမားလွန်း။ အသုံးပြုသူများသည်အကောင်းဆုံးအပူထိတွေ့မှုမရရှိနိုင်သည့်အတွက်အပူသည်ပိုမိုလေလေဖြစ်သည်။. ဒုတိယအကြောင်းပြချက်မှာသေးငယ်သည့်ချွေးပေါင်းအိမ်များသည်သုံးစွဲရန်ပိုမိုချွေတာသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံချွေတာပြီးပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပေးလိမ့်မယ်. အိမ်တွင်းတိုးတက်မှုစီမံချက်ကိုနှစ်သက်သောသူအတွက် sawna ပစ္စည်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်. လူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့၏ချွေးပေါင်းအိမ်အသစ်ကိုစနစ်တကျတပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်အထွေထွေအဆောက်အအုံနှင့် ပတ်သတ်၍ ဗဟုသုတရှိသင့်သည်. သို့သော်, အသုံးပြုသောချွေးပေါင်းအစုံသုံးခြင်းကအမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုသည်။ အခြေခံဗဟုသုတရှိသူတစ် ဦး ဦး သည်လျှပ်စစ်ပြonနာများအတွက်အကူအညီအနည်းငယ်နှင့်သာလိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုတပ်ဆင်နိုင်သင့်သည်။. အိမ်တွင်း Sauna တွင်ရိုးရိုးအိမ်သုံးပစ္စည်းများ
ရေအောက်ငုပ်ခြင်း – An Underwater Adventure
There’s nothing quite as mysterious as that which is contained underwater. Since the beginning of time, man has attempted to explore the deep of the sea; to investigate the secrets it holds. The modern equivalent of this exploration is scuba diving ‘aone-man voyage that can yield enormous adventure. But before you can dive, you must crawl, so to speak. Deciding whether scuba diving is right for you depends solely on your personality. If you’re someone who enjoys swimming, exploring, and adventurous activities, then chances are you will thoroughly enjoy scuba diving. သို့သော်, in order to complete the training and scuba dive safely and successfully you must also be in good physical health. If you have an interest in scuba diving you can get your feet wet through scuba instruction. In order to participate in scuba diving in open water, you must be trained and certified in scuba. You can findahost of training facilities in towns and cities throughout the world ‘ regardless of whether or not you live near the ocean. Scuba diving instruction is given in indoor pools because of the controlled environment. But before water work even begins, students are given extensive classroom instruction to familiarize them with the essentials of scuba diving. Once in the pool, the instructor will put the classroom instruction into practice, allowing students to practice techniques associated with scuba diving. Scuba diving instruction can take place over many weeks; it is imperative that students receive thorough training in order to ensure their safety. The culmination of training will be your certification in scuba diving. And you’re on your way. Reputable instructors can certainly point you in the direction of finding scuba gear that will be essential for your dives. Equipment necessary for scuba diving includesawetsuit, flippers, eye and face mask, and oxygen tank and accessories. You also have the ability to rent equipment prior to any dives; just be sure that you are taken out by scuba professionals who are reputable and experienced. Scuba diving can be an unbelievable experience that will forever transform you. Take the steps necessary to ensure your safety and the rest is pure enjoyment. ရေအောက်ငုပ်ခြင်း – An Underwater Adventure
ငါးဖမ်းမိသည်ဤနေရာတွင် Fraser Valley ရှိငါးဖမ်းလုပ်ငန်းထက်လွယ်ကူမည်မဟုတ်ချေ. သင် wade နိုင်ပါတယ် 1,000 မိုင်စီးဆင်းမှု, လှည့်လည် 1,000 မြင့်မားသောတောင်တန်းရေကန်များ၏က, or troll 11,000 ရေလှောင်ကန်၏က. သင်ပျံသန်းနေသည့်ငါးဖမ်းသမားတစ် ဦး လား၊ သို့မဟုတ်သင့်လိုင်း၏အဆုံးတွင်ညအိပ်ရှာဖွေသူရှိလား, သငျသညျဂရိတ်ကောင်တီတစ်လျှောက်လုံးငါးအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. သက်တံ, ကျောက်တုံး, အညိုရောင် & မြစ်အများစုတွင်ချောင်းရေချိုမြစ်ကိုတွေ့နိုင်သည်, mackinaw နှင့် Kokanee ဆော်လမွန်တို့သည်ပိုမိုကြီးမားသောရေထု၏နက်နဲသောပင်လယ်ကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်. ကော်လိုရာဒိုမြစ်သည်ရွှေတွင်းတံတားကိုပြည်နယ်တွင်တွေ့ရသောအကြီးမားဆုံးအညွန့်များနှင့်သက်တံများနှင့်အတူငါးဖမ်းခြင်းကိုကမ်းလှမ်းသည်. Fraser မြစ်သည် Winter Park မြို့ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည်, အဖြစ်အပန်းဖြေစခန်း, နှင့်အခြားအကြီးအနည်းနည်းသီးခြားချောင်းရေချိုငါး၏ရောက်ရေချိုငါးအစာကျွေးသည်. စိန့်. လူးဝစ် Creek နှင့် Willow Creek သည်တံငါသည်များကမ်းလှမ်းသည်, ဖြန့်ကျက်ချောင်း - ခြမ်းစခန်းချနေရာများနှင့်အတူလေးနှင့် browns. ထိုဒေသ၏အဓိကရေကန်လေးခုသည် Granby areaရိယာတွင်တည်ရှိသည်, ချဉ်းကပ်လမ်းများများများကမ်းလှမ်း & ခံစားလှေများအတွက် Marina. နှင့်အတူ 7,250 မျက်နှာပြင်resကနှင့် 40 ကမ်းခြေမိုင်, Granby ရေကန်သည်ကြီးမားသော mackinaws များကြောင့်လူသိများသည်. Grand Lake, ကော်လိုရာဒိုတွင်အကြီးဆုံးသဘာဝရေကန်ဖြစ်သည်, နှင့်တွဲဖက် Shadow Mountain ရေကန်လည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည် 20 ပေါင် macks. ထိုဒေသရှိရေကန်များသည်ဆောင်းတွင်း၌ရေခဲငါးများကြောင့်လူသိများသည်. မြင့်မားသောတိုင်းပြည်တွင်နှင်းများအရည်ပျော်မည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိပါ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုမှာသေချာသည်, ၎င်းမှရွေးချယ်ရန်ချောင်းများနှင့်ရေကန်များပေါများသည်. လူဆိတ်ညံရာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တောကန္တာရသည်သင့်ကိုအမေရိကန်စူးစမ်းရှာဖွေသူတစ် ဦး ကဲ့သို့ခံစားရစေသည်, သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရောက်ရေချိုငါးပရဒိသုရှာဖွေတွေ့ရှိ. Winter Park Resort မှ ၅ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်။ သွားပါ. Slope View အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာသည် Continental Divide အပေါ်အမြင်များကိုဖော်ပြသည်, ထူးခြားသောသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့န်ထမ်း. ဆောင်းရာသီပန်းခြံတွင်ကျောက်ဆောင်ငါးဖမ်းခြင်း, ကော်လိုရာဒို
Flexibility has been singled out as one of the most important components of the golf swing. Any time you have tight muscles your body responds in restricted movement. ဒီတော့, optimal flexibility becomes the key to freedom of movement in the swing. Any time you can enhance your flexibility, you have the potential to lengthen your golf swing and create greater club head speed. A golfer’s focus should always be on restoring normal range of motion before progressing onto more advanced strength programs. Dynamic stretches are highly recommended prior to each round of golf. Dynamic stretches are those that keep your body in motion throughout the full range of the stretch. It should not beatime consuming process. It should only take 10 ဒါမှမဟုတ် 15 minutes of your time and should be part ofafull warm up program you perform prior to play. This includes time to warm up your muscles, practice your technique and mentally prepare yourself for the round ahead. The ultimate goal is to increase the functional range of motion around the joints affecting the golf swing. Limited range of motion contributes to improper mechanics, fatigue, and injury. Here isacomprehensive list of benefits you’ll see by increasing your flexibility througharegular stretching program. ‘ Increases range of motion allowing you to stretch and reach further ‘ Improves distance, စွမ်းအား, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ကိုက်ညီမှု ‘ Reduces the incidence and severity of low back pain ‘ Improves your power in explosive activities ‘ Improves circulation and blood flow ‘ Relieves muscle soreness after intense physical activity ‘ Improves posture and muscle balance ‘ Increases muscle coordination ‘ Promotesamore fluid and natural golf swing ‘ Increases neuromuscular coordination ‘ Increases level of golf performance ‘ Allows you to feel more free through the full range of movement Take time to prepare your body for golf and you’ll noticeasignificant difference in your playing ability. Integrate Dynamic Stretching Into Your Pre-Round Routine
အကျဉ်းချုပ်သမိုင်း: Wing Chun (Wing Tsun ဟုလည်းလူသိများသည်, Ving Chun သို့မဟုတ် Ving Tsun) တရုတ်သိုင်းပညာ၏လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်, Wing Chun တွင်လက်နက်များပါ ၀ င်နိုင်သည်. Wing Chun ၏ဇာစ်မြစ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်ပို့နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှု၏အစစ်အမှန်သမိုင်းတာရှည်ဆွေးနွေးငြင်းခုံတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်. Wing Chun ၏မူလအစနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောအကြံပေးချက်သည်နောက်မှဖြစ်သည် 1700 Henan Shaolin ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိအေဒီ. အဆိုပါ Qing တပ်ဖွဲ့များတောင်ပိုင်း Shaolin ဘုရားကျောင်းဝင်ရောက်စီးနင်းနှင့်ဖျက်ဆီးသောအခါ, င Mui အမည်ရှိသီလရှင်သည်ဝေးလံသော Daliang တောင်တန်းများသို့ထွက်ပြေးခဲ့သည်, တစ်ခုတည်းသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ. ငွူအီသည် Shaolin ဘုရားကျောင်းရှိကွန်ဖူကိုသိပြီးဖြစ်သည်, အရာသူမကမြွေနှင့်ကိန်းအကြားစစ်တိုက်စောင့်ကြည့်နေစဉ်သူမကလေ့လာသင်ယူခဲ့သစ်တစ်ခုပုံစံနှင့်အတူ assimilated. သူသည်ဤတိုက်ပွဲပုံစံအသစ်ကိုသူမ၏မွေးစားသမီးအား Yimm Wing Chun အားသင်ကြားပေးခဲ့သည်. စနစ်သစ်ကိုပြန်လည်သန့်စင်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးဆက်တစ်ခုမှဆက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့သည်, နောက်ဆုံးတွင် Wing Chun ဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်, Yimm ပြီးနောက်. Wing Chun ကိုခေတ်မီအောင်ပြုပြင်ခြင်းသည် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်း Yip Man အမည်ရှိ Grandmaster လက်အောက်တွင်ဟောင်ကောင်၌စတင်ခဲ့သည်. သရုပ်ဆောင် Bruce Lee သည် Wing Chun ၏အကျော်ကြားဆုံးယောဂီများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသောအခါစည်းကမ်းချက်သည်အာရှနှင့်အနောက်နိုင်ငံများတွင်လူကြိုက်များလာသည်။. Wing Chun ၏အယူအဆ: Wing Chun သည်အခြေခံမူသုံးရပ်အပေါ်အခြေခံသည် – လက်တွေ့, လှုပ်ရှားမှု၏ထိရောက်မှုနှင့်စီးပွားရေး. 1. လက်တွေ့: ထိုကဲ့သို့သော Palm-up လက်အဖြစ်နည်းစနစ် (နောက်ပိုင်းတွင် tan), Wing Arm (Bong ပြီးနောက်), လက်ခုတ် (pak or) ထိုကဲ့သို့သောလည်ချောင်းအဖြစ်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထိခိုက်မခံသို့မဟုတ်ထိခိုက်လွယ်အစိတ်အပိုင်းများကို maim ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်, ပေါင်ခြံ, မျက်စိနှင့်အောက်ပိုင်းကိုယ်ထည်. Wing Chun ရှိလှုပ်ရှားမှုနှင့်နည်းစနစ်အတော်များများသည်မကြာခဏသေစေနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်. 2. ထိရောက်မှု: Wing Chun သည်အင်အားကိုဆန့်ကျင်သောအားဖြင့်မသုံးပါ, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအများဆုံးထိရောက်သောခြယ်လှယ်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်. ၎င်းသည်တိကျသောအချိန်နှင့်သင့်တော်သောနေရာချထားမှုလှုပ်ရှားမှုများကိုယုံကြည်သည်, နှင့်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အင်အားအပေါ်အခြေခံသည်. ဒီအယူအဆကို Contact Reflexes လို့လည်းခေါ်တယ်. 3. လှုပ်ရှားမှု၏စီးပွားရေး: ၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှုသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အလယ်ဗဟိုမှ ဖြတ်၍ ဒေါင်လိုက်လည်ပတ်နေသောစိတ်ကူးယဉ်တိုင်တစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံသည်. စင်တာလိုင်းသည်ဤမိခင်လိုင်းမှပျံ့နှံ့သွားသည်, နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အရေးပါသောအချက်များအများစု Center လိုင်းတလျှောက်တွင်တည်ရှိသည်ကတည်းက, အများအပြားထိုးစစ်နှင့်ခုခံကာကွယ်လှုပ်ရှားမှုများဒီလိုင်းပေါ်တွင်အခြေခံထားတယ်. ဗဟိုလိုင်း, သို့သော်ငြားလည်း, တိုက်ပွဲအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုအများစုပြုလုပ်သောတိုက်လေယာဉ်များအကြားအတိုဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်. Wing Chun ပုံစံများ: Wing Chun တွင်အခြေခံပုံစံသုံးမျိုးရှိသည်: 1. ဗလာလက်ပုံစံ: ဤပုံစံတွင်နောက်ထပ်ပုံစံငယ်သုံးမျိုးရှိသည် – Siu Nim Tao – အနုပညာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်, Chum Kiu – အဆင့်မြင့် footwork နှင့် entry ကိုနည်းစနစ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်, နှင့် Biu Jee – အစွန်းရောက်တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်တာဝေးပစ်နည်းစနစ်များ, အနိမ့်ကန်ဘောနှင့်လှည်း, နှင့်အရေးပေါ်နည်းစနစ်များ. 2. လက်နက်ပုံစံများ: နဂါးဝင်ရိုးစွန်းနှင့်လိပ်ပြာဓားများသည် Wing Chun တွင်ထည့်သွင်းထားသောလက်နက်နှစ်မျိုးဖြစ်သည်, အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ရေးအောက်မှာခွဲခြား. 3. သစ်သား Dummy သို့မဟုတ် Muk Yan Jong ပုံစံ: သစ်သားတိုင်များမှပြုလုပ်သောတေးဂီတသည်လူ့ပြိုင်ဘက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်. အဆိုပါ contraption ထောင့်စုံလင်ရန်အသုံးပြုသည်, အနေအထား, နှင့်ခြေထောက်. Wing Chun – တရုတ်ကိုယ်ခံပညာ
မပြုမီ 1996 Yankee နှင့် Joe Torre တို့အကြားကာလကြာရှည်ဆက်ဆံမှုကိုဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူး. Torre သည် Yankees မန်နေဂျာအဖြစ်သူ၏ ၁၀၀၀ မြောက်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်, Hideki Matsui ဟာသုံးခုရှိတဲ့ Homer တစ်ခုကိုသုံးပြီး 8-5 ရာသီမြင့်ဂိမ်းငါးမှနယူးယောက်ရဲ့အနိုင်ရတဲ့ Streak ဆန့်သောတနင်္ဂနွေတက္ကဆက် Rangers ကျော်အောင်ပွဲ. တောရက်စ်တွင် 1,000-645 နယူးယောက်နှင့်အတူစံချိန်တင်, သူ့ရှေ့မှာငါတို့ဂျိုးဆက်မက်ကာသီကိုတွေ့သည် (1,460), ကာဇီ Stengel (1,149) နှင့် Miller က Huggins က (1,067). Stengel မှ စ၍ Torre သည်အရှည်ဆုံးနှင့်ကြားဖြတ်အရှည်ဆုံးသက်တမ်းရှိသည် 1949-60. ရန်ကီးပိုင်ရှင်ဂျော့ခ်ျစတိန်းဘရန်နာနှင့်ရန်ကီးပရိသတ်များအားလုံးသည်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်မှန်ကန်သောအပြုအမူများကြောင့်သူအားဂုဏ်ယူသင့်သည်။. ကစားသမားများသည် Torre အားသူ၏ပင်ကိုစိတ်ထားနှင့်ကွဲပြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများကိုင်တွယ်နိုင်မှုအတွက်ဂုဏ်တင်ကြသည်, ထို့အပြင်သူသည်အဖွဲ့အစည်းကို၎င်းကိုမည်သည့်နေရာ၌ပြန်ရောက်လာစေရန်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသာပြုလုပ်ခဲ့သည်. တထောင်ကီးအောင်ပွဲမှ Torre ရဲ့လမ်းအချိန်များတွင်ဘုန်းကြီးသောဖြစ်ခဲ့သည်, ခြောက်လသာမှတ်ပုံတင်နှင့်လေးစီးတီးစီးရီးခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ. ကောင်းပြီ 1,000 အောင်ပွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်, သငျသညျနောက်ကျော '96 အတွက်နှစ်နှစ်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်ထိုအချိန်မှစ။ ဖြစ်ပျက်စဉ်းစားအထူးသဖြင့်အခါ. ရန်ကီးသမိုင်းစာအုပ်သည်ဂျိုး Torre အတွက်အထူးနေရာဖြစ်ပြီးအလွန်ထိုက်တန်သောစာအုပ်ဖြစ်သည်. 1,000 အောင်ပွဲများနှင့်ရန်ကီးရဲ့သမိုင်းစာအုပ်ထဲတွင်နေရာ
Flash Casino knockout are those that run stock and barrel inaFlash program on your web browser. By loading the on-screen ostentatious nightclub directly in the , there is no download requisite. ဒီအတွက်ကြောင့်, an virtual showy casino is also referred to asa“no download gaming club”. In this insertion to Flash Casino gaming, I’ll discuss some of the key to atano download gaming house. Online Flash Casino Advantages – Realistic Gameplay The graphics and intact personal property ofano download gambling den are generally better. By better, I mean the dream are more confident, the animation smoother and the sturdy belongings more translucent. The visible and definite effects be fluent in directly to our most predominant senses, in so doing creatingamore realistic, true gaming house gaming event. Online Flash Casino Advantages – Time & Space Timeakey role in the haughtiness of Online Flash Casino gaming. As in most instances of our everyday , when givenachoice, we decide the way to succeed our . No download casinos consent for instantaneous play, whereasafixed electronic casino will require the download ofa.zip or .exe file, predictably 5MB to 15MB or more, followed byainterminable ordination activity. Online Flash Casino Advantages – PC Safety This up additional notable question – what if the online nightclub isn’t licensed? The most trendy and successful connected casinos are absolutely licensed and planned, but it would be unwise to suppose that every working gambling den guidelines. Any cyber- gaming club that lacks the veracity to be delimited may not be out for the best attention of it’s players. To put it transparently, the software download may comprehend malevolent files deliberate to source destruction to the user’s computer. With Online Flash Casino games, there is no time, force and computer space invested – no difficult putting in place means – no risk of placing possibly harmful materials onto your hard passion. Online Flash Casino Advantages – Compatibility Attributing at tiniest in part to the thrilling approval of no download gaming house meet is the compatibility component. The Flash Plug-In is compatible with all major going – Microsoft Windows, Mac and Linux included. Check out the coordination requirements of any accessible nightclub software thatadownload, and you’ll find it’s only compatible with Microsoft Windows. 98% of the flora and fauna’s computers are already furnished with Flash. Anyone with an elder computer has likely already encounteredaFlash program at some contact, then has already the Flash Plug-In on computer. Anyone withanewer computer will Flash to be pre-installed. If for any reason Flash is not already , the no download casino will ready the user to fit Flash, which is an virtually instantaneous course of action, much than and installingasoftware program. Online Flash Casino Advantages – Game Variety Flash equipment has been utilized to build up all of the most admired gambling den competition, giving playersanigh on to unlimited miscellany of no download gaming club sports event to enjoy. Table Games, Card Games, ကဒ်အထိုင်များ, Video Poker, Parlor Games, – you name it, Flash programmers have created it. From BlackJack, ကစားပွဲ, ကျောက်တံတား, Baccarat, Casino War and Pai Gow Poker to 3-Reel, 5-Reel and 7-Reel Slots with compound . Deuces Wild Video Poker, Double Bonus Joker Poker, even Keno, Scratch Cards and Bingo tournament. These are justafew of the players can appreciate when playing atano download gaming club. All About Online Flash Casino Games
တစ် ဦး ကအသုံးပြု Kayak သစ်တစ်ခုကဲ့သို့ကောင်းသောနိုင်သလား?
လှေအသစ်တစ်စင်းသည်ငွေအမြောက်အများကုန်ကျသည်. ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်သုတေသနနှင့်အတူ, အသုံးပြုသောယပ်လှေသည်စျေးနှုန်းထက်ဝက်ခန့်သာကောင်းနိုင်သည်. ကေးယက်သည်လူများစွာအတွက်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်. လှေတစ်စင်းအတွက်ပေးရတာကမနာပါဘူး. သင်အသုံးပြုသောတွဲဖက်ငွေလှေဝယ်နိုင်သည်. တွဲဒမ်သည်ကယပ်လှေများစွာကိုထုတ်လုပ်သောအခြားကြီးမားသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်. Tandem အမှတ်တံဆိပ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းများအတွက်အသုံးပြုသောကြီးကျယ်သော Tandem ယပ်လှေများကို ၀ ယ်ယူနိုင်ခြင်း၊, အချိန်အများစု, ကောင်းသောပုံသဏ္inာန်၌တည်၏. အသုံးအဆောင်ယပ်လှေတစ်ခုကိုရှာရန်လွယ်ကူသည်. ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသောလှေလှော်ရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအင်တာနက်ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်. သငျသညျရောင်းရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးအများဆုံးလှေများနှင့်ကုန်သည်များမှတဆင့်ရောင်းအားရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်. မျက်မှောက်ခေတ်ယပ်လှေများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြောင့်အသုံးပြုသောမော်ဒယ်များအတွက်ဝယ်လိုအားလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်. အသုံးပြုသောငွေလှေကိုရှာခြင်းဖြင့်သင်ငွေအမြောက်အများစုဆောင်းနိုင်သည်. အသုံးပြုတဲ့ယပ်လှေဝယ်တဲ့အခါ, အဲဒါကိုမ ၀ ယ်ခင်လှေကိုသေချာစစ်ဆေးဖို့အရေးကြီးတယ်. ကယပ်လှေများသည်အခြေအနေအသစ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်. သင်၏ငွေကိုပျက်စီးသွားသည့်လှေထဲသို့မထည့်ချင်ပါ. လှေ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူယိုယွင်းရဲ့ကိုယ်ထည်အပေါ်ချိုသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနိုင်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏စေ့စေ့စပ်စပ်စစ်ဆေးမှုများပြုမိကြတဲ့အခါ, ကယပ်လှေဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ifာန်ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အများကြီးရှာတွေ့မှာပါ. ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ငွေလှေအသစ်တစ်စင်းကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သင်ကအဲဒီ့ထက်ဝက်ထက်နည်းတဲ့သုံးစွဲမှုတစ်ခုကိုသုံးနိုင်တယ်! ငွေစုဆောင်းရန်အရေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့်ဒါသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသည်. သငျသညျအသုံးအများဆုံးယပ်လှေစစ်ဆေးခြင်းကိုသွားမီ, သငျသညျကောင်းသောသုတေသနလုပ်ပြီနှင့်ရရှိနိုင်ပါအကောင်းဆုံးအပေးအယူတွေ့ပြီသေချာပါစေ. သင်အသုံးပြုသောယပ်လှေဝယ်ယူရန်စီစဉ်ထားသည့်နေရာနှင့်နီးကပ်ကြောင်းကိုလည်းသင်သေချာစွာသိလိုပေမည်. သင်၏သုတေသနသည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်နိုင်သည်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် ပိုမို၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများကိုတတ်နိုင်လိမ့်မည်, နှင့်, အရေးကြီးသလိုပါပဲ, ရေပေါ်မှာအချိန်ပိုပေးနိုင်တယ်. တစ် ဦး ကအသုံးပြု Kayak သစ်တစ်ခုကဲ့သို့ကောင်းသောနိုင်သလား?
The key to playing par golf is to focus on more than just golf techniques, and pay attention to your entire body. Fitness is key to any sport, whether you’re running up and downabasketball court, throwingafootball or playing the links. Withoutaproper fitness routine, your body is not going to be able to deliver the results you need. When it comes to golf, there are four basic elements to good fitness: ချိန်ခွင်လျှာ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, strength and endurance. You will want to assess how well you currently perform in each of these categories to determine how you should plan your fitness routine. If you find that one area poses difficulties for you, you will want to begin slowly in that area and work up to harder exercises and stretches. As with any new fitness routine, make sure your doctor has cleared you to begin. Balance is essential in golf. Golfers who have exceptional balance will have more efficient reaction times and movement speed, because improved balance allows them to execute weight transfer and hip rotation without jeopardizingastable address position. Flexibility allows your muscles to extend through their full range of motion when you swing; it is actually the single most important physical characteristic likely to influence your golf swing. If your body is tight in any one area, your swing is going to be hindered and swing compensations begin. Strength is what provides you with power behind your swing and distance to your drive. ဖြည့်စွက်ကာ, adding strength to your ‘golf muscles’ will help prevent injury. In golf, focus on your ‘go’ muscles and not your ‘show’ ကြွက်သားများ. နောက်ဆုံးတော့, endurance is what keeps your game in peak performance whether you are teeing off on the first hole or sinkingaputt on the last hole. If you have stamina and endurance, you can count onagood performance throughout your game and not worry about fatigue setting in midway through. All of these areas can be addressed through exercises and stretches incorporated intoafitness routine. Once your body can meet the demands of your golf game, you haveabasis to build upon by perfecting techniques and skills. အတူတူ, these tasks will turn you intoapar golfer. Do You Want To Play Par Golf?
လေးကိုလိုက်ရှာရတာမလွယ်ဘူး. လုပ်ရန်အခက်ခဲဆုံးသောအရာတစ်ခုမှာသင့်လေးကိုလုယူနေသောလုယူရာဥစ္စာနှင့်မီးနှင့်နီးစပ်စေရန်ဖြစ်သည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သေနတ်ရာသီနီးကပ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်အမဲလိုက်သည့်အချိန်တွင်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်လမ်းတည်းဖြင့်တစ်လမ်းသွားဖြစ်လိမ့်မည်. လေးနှင့်အတူအမဲ, သေနတ်ရာသီကုန်ဆုံးသည့်အချိန်များတွင်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဖုံးကွယ်ဖို့နေရာများစွာရှိသည်မဟုတ်, ဘာလို့လဲဆိုတော့အရွက်အများစုဟာဒီအချိန်မှာကုန်သွားပြီးမုဆိုးကသတိထားပြီးအတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုတယ်. မုဆိုးများစွာသည်သူတို့၏ဆုတောင်းချက်များကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သစ်ပင်များကိုပုန်းအောင်းနေကြသည်. အကျော်ကြားဆုံးဆုတောင်းခြင်းမှာသမင်ဖြစ်သည်, နှင့်လေးနှင့်အတူသမင်အမဲလိုက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်အကြိုးသွားအချိန်. လေးနှင့်အတူအမဲလိုက်သမင်တစ် ဦး အနီးကပ်inရိယာ၌ထိုသို့ပြုသည့်အခါမုဆိုးအားသာချက်တစ်ခုပေးသည်. အတွေ့အကြုံရှိသောလေးသမားအများအပြားသည်ထင်းရှူးပင်သစ်တောatရိယာများတွင်သမင်ကိုလိုက်ရှာကြသည်. ထိုကဲ့သို့သောဒေသများရှိအမဲလိုက်ခြင်းဟာသမင်ရဲ့အားသာချက်ကိုပယ်ရှား, ကပုံမှန်အားဖြင့်လေးကိုကန့်သတ်အကွာအဝေးကြောင့်ရှိသည်မယ်လို့အားသာချက်. သစ်တောintoရိယာသို့ ဦး တည်သွားသောလေးလံသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, ထင်းရှူးနှင့်အတူareaရိယာ, အနီးတစ်ဝိုက်ကြီးကြပ်သောအပင်တစ်ပင်ကိုတက်ပါ. လေးကိုပစ်ရန်အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးတစ် ဦး အတွင်း၌ကြောင်းကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ 50 ခြံအချင်းဝက်. သင်ပုန်းကွယ်ရန်ကောင်းသောနေရာရှာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. ဤofရိယာ၏အစွန်းတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်သင်၏ဆုတောင်းခြင်းကိုမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်စေလိမ့်မည်. သင်ကကမ်းခြေလက်မနှင့်တူနေပြီးသင်၏လေးကိုပစ်ရန်ဘယ်သောအခါမျှအခွင့်အရေးမရှိပါ. အတွေ့အကြုံရှိမုဆိုးများသည်ထိုသမင်ကိုကောင်းစွာသိကြသည်, အထူးသဖြင့်အမဲလိုက်ရာသီအဆုံးမှာ, ပွင့်လင်းသစ်မာဝင်သောအခါသို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်သောအခါအလွန်သတိထားကြသည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထင်းရှုးတောထဲသို့ဝင်သောအခါသူတို့သည်စိတ်အေးအေးထားကြသည်. ထင်းရှူးပင်ထူထပ်သောနေရာသည်သမင်များကိုပုန်းခိုရာနေရာတစ်ခုပေးသည်, ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချမှုကိုခံစားရစေပြီးမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှထိုနေရာတွင်ရှိနေရန်မမျှော်လင့်သောအနီးကပ်အဖုံးဖြစ်သည်. သမင်တစ်ကောင်ကိုသတ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလျှင်မုဆိုးသည်အမြဲတမ်းနိုးနိုးကြားကြားရှိဖို့လိုသည်. အတွေ့အကြုံရှိမုဆိုးတိုင်းသည်များသောအားဖြင့်သူတို့မမြင်မီသူတို့၏ဆုတောင်းချက်ကိုကြားကြောင်းပြောပြလိမ့်မည်. အချိန်အများစု, အသံတစ်ခုကြားရခြင်းသည်မုဆိုးကို ဦး တည်ရာကိုကြည့်စေသည်, ဆုတောင်းပဌနာ၏ညှနျကွားဆီသို့ ဦး တည်. နိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်းသည်အမဲလိုက်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်, အထူးသဖြင့်လေးနှင့်အတူအမဲလိုက်တဲ့အခါ; သစ်တောထင်းရှူးinရိယာ၌အမဲလိုက်တဲ့အခါပိုပြီးဒါ. သမင်များသည်ဤဒေသရှိမုဆိုးများထံခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြလိမ့်မည်. သူတို့ကရံဖန်ရံခါထင်းရှူးပင်များတွင်သစ်ရွက်တစ်ချောင်းကိုဖမ်းမိသော်လည်းအသံတစ်ခုမှမလိုဘဲနောက်ကွယ်မှခိုးထွက်သွားနိုင်သည်. ထို့ကြောင့်မုဆိုးများစွာသည်ဤအမဲလိုက်ခြင်းမျိုးစဉ်အတွင်းသူတို့နှင့်အတူအကြားအာရုံကိရိယာများရှိသည်ကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်. လေးနှင့်အတူအမဲလိုက်တဲ့အခါ, သင်အနီးကပ်ထရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းထက်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးလိုအပ်လိမ့်မည်. ကြားနာလက်ထောက်အပြင်, ကောင်းသောနွေးထွေးသောအထည်နှင့်ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်မုဆိုး ဦး ထုပ်ကောင်းတစ် ဦး ညှိညှိအမဲလိုက်လေးကိုရှိသင့်ပါတယ်. Beginners များအတွက်လေးနှင့်အတူသမင်မုဆိုး
7 တစ် ဦး ကစမတ်လောင်းကစားဖြစ်လာဖို့သိကောင်းစရာများ – အပိုင်းနှစ်ပိုင်း
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပြောဆိုခဲ့သည်, ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့နှင့်အတူဝေမျှဖို့စတင်ခဲ့တယ်7တစ် ဦး စမတ်လောင်းကစားသမားဖြစ်လာမှအကြံပေးချက်များ. ပြန်လည်ရရန်, ကျနော်တို့အိမ်မှာအစွန်း - သိ။ သုံးအရေးပါသောစမတ်လောင်းကစားအကြံပေးချက်များကျော်သွား၏, တစ် ဦး bankroll တည်ထောင်ခြင်း, အမြဲတမ်းမင်းရဲ့ပိုက်ဆံကိုသိမ်းယူတာပေါ့. ဒီနေ့, ငါငါတို့၏ဤကြီးစွာသောခရီးအပေါ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်. ငါတို့ရှိသမျှသည်စမတ်လောင်းကစားသမားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်. နောက်ဆုံး4စမတ်လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးချက်များသည်သင့်ကိုလျင်မြန်စွာပျံသန်းလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်အဆင်သင့်ပါ. သတိရပါ, ဤရွေ့ကားသင်စတင်ရန် primer ဖြစ်ကြသည်. သင်စူပါလေးနက်နေလျှင်, သငျသညျပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားနိုင်ဘူး. ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ် ဦး တည်း bankroll အပေါ်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုလုံးကိုစာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိကိုဖတ်ရှုနိုင်ဘူး. ဒီနေရာမှာစမတ်လောင်းကစားအကြံပေးချက်များဖြစ်ကြသည်3– 7: 3. မင်းရဲ့ဂိမ်းကိုသိပါ။ တကယ်ကောင်းကောင်းမသိရင်ကာစီနိုဂိမ်းကိုဘယ်တော့မှအလေးအနက်မကစားပါနဲ့. သင်ယူနေစဉ်သို့မဟုတ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေစဉ်အတွင်းနှစ်ကောင်သုံးခြင်းလောက်သာအကျိုးရှိသည်, ဒါပေမယ့်အလေးသာမှု၏ဒဏ်ငွေအသေးစိတ်ကိုမသိဘဲထပ်ခါထပ်ခါကစားရန်အခြားပါပဲ, မဟာဗျူဟာ, စသည်တို့. 4. ဒါဟာအထူးပြု fine မှကောင်းပါတယ်ဂိမ်းတစ်ခုထက်ပိုသောအသိပညာ’ တ ဦး တည်းဂိမ်းထဲမှာ, ဒါပေမယ့်သင်ကနှစ်ခုဂိမ်းများသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကောင်းစွာသိသင့်ပါတယ်. ကဂိမ်းတစ်ခုကနေလမ်းလျှောက်ဖို့စမတ်ရဲ့အခါကြိမ်ရှိလိမ့်မည်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်၏ ဦး ခေါင်းရုံထိုအချိန်ကကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သို့မဟုတ်ဂိမ်းမှားလမ်းမှားလွန်းပူလွန်းသည်. 5. slot တွေကပျော်စရာကောင်းတယ်။ တစ်တန် slots တစ်လုံးကစားပြီးကစားသမားတစ် ဦး ကိုပြပါ။ များစွာသောအနိုင်ရခဲ့တယ်။ ကြီးမားတဲ့ jackpot ဒါမှမဟုတ်မုသာကောင်ကိုနှိပ်ပြီးကံကောင်းထောက်မစွာပေးခဲ့တဲ့တစ်ယောက်ကိုငါပြမယ်။. slot တွေကပျော်စရာပါ, အမြတ်အစွန်းမဟုတ်. ဆေးများဖြင့်သူတို့ကိုခံစားခြင်းနှင့်အတူမှားဘာမျှရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီကသင်၏အဓိကဂိမ်းစေပါဘူး. 6. တစ် ဦး ကအစွန်အဖျားတစ်ခုဆုံးရှုံးမှုဒါဟာအစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှာကစားယောက်ျားတွေနှင့် gals အဘို့ဖြစ်၏. ကစားသမားကောင်းများရောင်းဝယ်သူများသို့မဟုတ်ကော့တေးစားပွဲထိုးအမျိုးသမီးများအတွက်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းသည်သာမန်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်. ဒါကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသွားပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကဲ့သို့သောအဖြစ်ကဆက်ဆံဖို့လိုအပ်ပါတယ်. သင်ကစားနေလျှင် $1 Blackjack နဲ့မင်းတက်နေတယ် $10 ကော့တေးစားပွဲထိုးမယ်လာမယ်ဆိုရင်တစ်မိနစ်လောက်စဉ်းစားပါ. သင်ဖြည့်ပါ $1, သင်ရုံပျောက်ဆုံးသွားပါပြီ 10% သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်း၏. ငါ tip မကြဘူးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကဆွေမျိုးစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်. ပြီးတော့ပိုက်ဆံအားလုံးဟာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကောင်းကျိုး၊. 7. သင်ဘာလုပ်သည်ကိုချစ်ပါ Baccarat သည်အရေးမကြီးပါ (အလောင်းအစား) အကယ်၍ ဂိမ်းကသင့်ကိုမျက်ရည်များကျစေမယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲ၌အကောင်းဆုံးကစားနည်းဖြစ်သည်. သင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသင်ချစ်ရမည်. မရရှိလျှင်, သငျသညျစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်းရိရလိမ့်မယ်ငွေသေချာပေါက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အခါပါပဲ. သင်၏ကိလေသာနှင့်ကပ်ပါ. ပြီးတော့အဲဒီမှာသင်သွားပါ. ဒါပါပဲ7တစ် ဦး စမတ်လောင်းကစားသမားဖြစ်လာမှအစိုင်အခဲအကြံပြုချက်များ.7တစ် ဦး ကစမတ်လောင်းကစားဖြစ်လာဖို့သိကောင်းစရာများ – အပိုင်းနှစ်ပိုင်း
Kayak အသစ်တစ်ခုကိုသင် ၀ ယ်နေရင်အကူအညီရနိုင်ပါတယ်
ကယပ်ကတ်တွေကို ၀ ယ်လို့ရမယ့်ကုမ္ပဏီအမြောက်အများရှိတယ်. သို့သော်လူအများစုအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာ Coleman ဖြစ်သည်. သင်ကယပ်လှေရှာနေရင်, ပြီးရင် Coleman kayak ကိုမင်းအတွက်အဆင်ပြေစွာရှာနိုင်မှာပါ! Coleman သည်အကောင်းဆုံးကယက္ကန်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်. Coleman ယပ်လှေဝယ်ယူသူများသည်သူတို့၏အရည်အသွေးနှင့်စတိုင်လ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်. Coleman ကယပ်လှေများကိုအပန်းဖြေရန်နှင့်အပန်းဖြေရန်အတွက်လှေလှော်ခြင်းအတွက်လေ့ရှိသည်. သို့သော်သင်သည်ကေးရှင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ အလေးအနက်ထားလျှင်, သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရေလှောင်ကန်တစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်. ထံမှရွေးချယ်ဖို့အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များရှိပါတယ်. Coleman ရဲ့ Two- လူတစ် ဦး, ငွေလှေသည်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်အများဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်သည်. Coleman သည်စတိုင်လ်အမျိုးမျိုးနှင့်အရည်အသွေးကောင်းလှသည့်ကယက်ခ်များကိုပုံစံပြုသည်. သင်ကလူနှစ် ဦး ရနိုင်သည်, လူတစ်ယောက်, Deluxe, ငွေကွေး, လေပြေ, ယှဉ်ပြိုင်မှုယပ်လှေနှင့်ပိုပြီး. အားလုံးသောနေရာတစ်ခုတွင်ကယပ်လှေပုံစံများစွာကိုတွေ့နိုင်သည်. Coleman သည်အားကစား၌အကောင်းဆုံးကယပ်လှေများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းသည်စိတ်ချရသောနာမည်ဖြစ်သည်. Coleman kayaks နှင့်သင်ရရှိသောအပိုဆုများထဲမှတစ်ခုမှာလှော်များပါဝင်သည်. ၎င်းသည်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်မတူပါ၊ အပို ၀ ယ်ယူခြင်းမှသင့်ကိုကယ်တင်သည်. Coleman နာမည်ကဆိုလိုတာကသူတို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်လှတဲ့လှေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာအောင်ပြောနိုင်တယ်. အရည်အသွေးနိမ့်သည့်လှော်ကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊. သင့်ရဲ့လှော်ကကောင်းတဲ့တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်ကယပ်လှေသည်အကောင်းတစ်ကားမဟုတ်ပါ, တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ! Coleman သည်သင်၏ kayaking အတွေ့အကြုံကိုတတ်နိုင်သမျှကုန်ကျစရိတ်သက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်ကူညီနိုင်သည်. သငျသညျပြီးပြည့်စုံသောယပ်လှေရှာဖွေစူးစမ်းတဲ့အခါမှာ, Coleman နာမည်ရှာရန်သတိရပါ, သငျသညျအကြီးအအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောယပ်လှေကိုရှာဖွေသေချာပါလိမ့်မည်. ဒီဟာကေးအသစ်တစ်ခုအတွက်စျေး ၀ ယ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်သိတယ်: Coleman နာမည်အပေါ်မှီခိုပြီးငွေလှေလှော်ဈေးသည်အလွန်လွယ်ကူကြောင်းသေချာစေပါ! Kayak အသစ်တစ်ခုကိုသင် ၀ ယ်နေရင်အကူအညီရနိုင်ပါတယ်
ငါးဖမ်းခြင်းသည်အနားယူရန်ဝါသနာဖြစ်ပြီးမိသားစု ၀ င်များ၊ ချစ်သူများနှင့်အားလပ်သောအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်ပင်ပြုလုပ်သောအခါပျော်စရာကောင်းသည်။. ၎င်းသည်လူအများစုအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်အခြားမည်သည့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများဆင်တူသည်, ငါးဖမ်းနေဆဲဘေးကင်းလုံခြုံမှုလိုအပ်သည်. ဘယ်သူမှလုံခြုံမှုကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး. အဓိကအားဖြင့်, ငါးမျှားထွက်သွားခြင်းမပြုမီ, မင်းရဲ့ ၀ တ်စုံကလှုပ်ရှားမှုအတွက်သင့်တော်တယ်လို့သေချာအောင်လုပ်ပါ. နေပူလွန်းနေသလား၊ တစ်နေကုန်နေမလားဆိုတာသင်ဘယ်တော့မှမပြောနိုင်တဲ့အတွက်ရာသီဥတုကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းထားသင့်တယ်. နေသာသောနေ့သည်မိုးအုံ့။ ပင်မိုးရွာနိုင်သည်, ကအမြဲတမ်းတစ်လျှောက်အပိုတစ်ခုခုယူဆောင်လာရန်အကြံပြုလိုတယ်. ဒါကြောင့်မိုးရာသီပါပဲ, အအေးခံခြင်းမှသင့်အားကာကွယ်နိုင်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအမြဲတမ်းယူဆောင်လာပါ. သင့်ရဲ့ငါးဖမ်းကိရိယာများကိုကိုင်တွယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အပိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအမြဲလေ့လာတွေ့ရှိရပါမည်. မတော်တဆမှုများလွန်းသောကြောင့်ငါးဖမ်းလှေတစင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်. လိုင်းကိုပစ်တဲ့သူကပြintoနာတက်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်. သင်၏ရေကိုယုံကြည်မှုရှိစွာမချမီမည်သူသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကိုနောက်ကွယ်တွင် ဦး စွာစစ်ဆေးသည်ကိုစစ်ဆေးပါ. မင်းနောက်ကွယ်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမသေချာဘူး (e.i ပါဝါလိုင်းသို့မဟုတ်သစ်ပင်). သင့်ရဲ့ငါးဖမ်းလှံတံကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်နေရာချ, နေဆဲဂရုတစိုက်လုပ်ပါ. မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားစေသည့်အတွက်အခြားသူတစ် ဦး ကိုသင်ခြေလှမ်းမလှည့်ပါစေနှင့်. သင်၏ငါးဖမ်းကိရိယာများကိုသင်စွန့်ခွာမည့်နေရာကိုဂရုပြုပါ. ငါးမှချိတ်ကိုဖယ်ရှားလျှင် (ဒါကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်လာလျှင်), သင်၏ရှင်းလင်းသောလက်များဖြင့်အတင်းမသွင်းပါနှင့်. ငါးမှဖယ်ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်ကတ်ကြေးနှင့်လိုင်းဖြတ်ရန်ချိတ်စက်ဖျက်စက်ကိုသုံးပါ. ငါးနှင့်ကျန်ရှိသောချိတ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ထွက်သွားပါလိမ့်မည်. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သို့မဟုတ်ငါးဖမ်းခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောမည်သူမဆိုမပါဘဲငါးမျှားခြင်းကိုမလုပ်ပါနှင့်. သင်ငါးဖမ်းနေစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်သင့်အားစောင့်ရှောက်သူတစ် ဦး ရှိရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာအခြားသူတစ် ဦး ၏အကူအညီကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာကိုသင်မသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။. ငါးဖမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတိပေးချက်များ
Karts သွားပါ – ပြိုင်ပွဲဝါသနာရှင်များဖြစ်လာသည်
မြင်ယောင်ကြည့်ပါ – မင်းရဲ့ Sprint Kart ကို Circuit ကနေစလိုက်တဲ့ Curve ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်ထည်ကို Ripping. ၂၁ ကြိမ်မြောက်ပျံ့နှံ့မှုကိုအလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုသင်အဆုံးအဖြတ်ပေးသောလက်နှင့်မျက်စိညှိနှိုင်းမှုကိုပြုလုပ်စဉ်အရှိန်မြှင့်စက်ကိုနှိပ်ခြင်း? တစ်နာရီ enduro ပြိုင်ပွဲ၏မိနစ်. သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းတစ် ဦး ဘေးကနေဖြစ်လိမ့်မည် – သူတို့နောက်ဆုံးလည်ပတ်ပေါ်လည်ပင်းနှင့်လည်ပင်းပြိုင်ပွဲအဖြစ်ဖာနန်ဒို Alonso နှင့်မိုက်ကယ် Schumacher ၏အကြိုက်များအတွက်လမ်းကြောင်း. ဘာလို့ထင်လဲ – သငျသညျအသက်ရှူနှင့်သက်သေခံနေကြသည် (ပင်ဖုန်လမ်းကြောင်းအပေါ်ရွှံ့စေး၏ထူးခြားသောအနံ့ကိုအနံ့) go-kart ပြိုင်ကားနှင့်အတူလာသောလေထု. ရိုးရှင်းသောဘောင်များမောင်းနှင်ရန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်နှင့်အဆင်မပြေစေရန်ဇွဲနှင့်လေယာဉ်မှူးများက ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်တီထွင်ခဲ့သည်, Pasadena တွင် Art Ingels ကပထမဆုံး kart-kart ကိုဆောက်လုပ်ပြီးနောက် go-karting ကိုနိုင်ငံတကာတွင်တိုးချဲ့ခဲ့သည်. အပေါ်ကျိန်းဝပ်မီအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဥရောပအယူခံဝင်ခြင်းနှင့်ဖော်မြူလာ၏အထွတ်အထိပ်ကိုဆွေးနွေးခြင်း 1 ပြိုင်ပွဲ, တစ်စက္ကန့်များအတွက်နောက်ကြောင်းပြန်ကြကုန်အံ့. go-karts စီး (သို့မဟုတ် karting) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲသို့ချိုးဖျက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲများ၏ရှုပ်ထွေးသောနယ်ပယ်ထဲမ ၀ င်မီ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ထည်အားလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ပေါက်ကွဲစေသည့်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။. တစ်ခုတည်းဆလင်ဒါအင်ဂျင်, အခြေခံကိုယ်ထည်မော်ဒယ်များ, အမြန်ထုတ်လုပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများမရှိခြင်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်သောကာတွန်းပြိုင်ပွဲကိုပြုလုပ်သည်, အစပြုသူနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဆီသို့ ဦး တည်ရည်ရွယ်. ရှေ့ပြေးပုံစံကတ်ကိုစဉ်းစားသောအခါ Sprint Karting ဟူသောအယူအဆသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲပေါ်လာသည် & အပန်းဖြေပန်းခြံများတွင်ခြေရာခံ, အပန်းဖြေဒေသများ, နှင့် Arcade နန်းတော်. ချောချောမွေ့မွေ့ဒီဇိုင်းများနှင့်ကြံ့ခိုင်ဘောင်များနှင့်အတူစံနမူနာ karts တိုတောင်းသောလမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြတ်သန်း, များသောအားဖြင့်ကတ္တရာသို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်မှပြုလုပ်သည် – တစ်မိုင်ဝက်အတွင်းအရှည်တစ်မိုင်အထိ. Sprint karting ကိုအတန်းများခွဲခြားထားသည် (လက်ဝှေ့ထိုးအလယ်တန်းနှင့် welterweights စဉ်းစားပါ) အင်ဂျင်အမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသည် (Two- နှင့်လေးသံသရာ), ကားမောင်းသူ (အသက်နှင့်အလေးချိန်အရခွဲခြား), kart ၏အမှတ်တံဆိပ် (Yamaha နှင့် Honda တို့သည်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်), နှင့်သတ်မှတ်ချက်များ. ကာဗွန်ဖိုင်ဘာလုပ်ထားသောဘောင်များနှင့် McLarens တွင်ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းများမတပ်ဆင်ထားပါ! Sprint Karting သည်ရိုးရှင်းပါသည်, တိုတောင်းသောပုဒ်နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် go-kart ပြိုင်ကား၏လျှော့ချပုံစံ, အဆင့်မြှင့်နည်းပညာ, အတွေ့အကြုံနည်းသောယာဉ်မောင်းများ, နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးအစိတ်အပိုင်းများအဆင့်မြှင့်. အခြားကာတွန်းပုံစံများတွင် enduro ပြိုင်ကားများပါဝင်သည်. ခံနိုင်ရည်ပြိုင်ပွဲ, ဒါမှမဟုတ် “enduro” တိုတောင်းသောအဘို့အ Sprint တစ်ကြာရှည်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်. aerodynamical လိပ်ပြာစတီယာရင်ကမောင်းနှင်သည်, enduro karts များသည် Sprint Karts များထက်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည် – တစ်နာရီ (သို့) ထိုထက်မကသောလူမျိုးများတွင်ပါဝင်ခြင်း. ဖုန်, ဘဲဥပုံလမ်းကြောင်းများသည်ခံနိုင်ရည်ပြိုင်ပွဲ၏အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးအခြားနေရာများထက်အနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့သည်. ရှည်လျားသောပြိုင်ကားကာလ၏, မြန်နှုန်းကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းထက်တာရှည်ခံ karts များနှင့် pit stop ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအထူးအလေးထားသည်. အပြေးသမားရဲ့စည်းကမ်းချက်များ၌, enduro တစ်မာရသွန်ဖြစ်ပါတယ် – Sprint မဟုတ်ဘူး. သငျသညျပြိုင်ပွဲများ၏သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမြန်နှုန်းများအတွက်ကိုယ်ထည်နှင့်တာယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုပူဇော်လျှင်, ပန်းဝင်မျဉ်းသို့ရောက်ရန်မှာမေးခွန်းမရှိချေ. အောင်မြင်သော Sprint ကားနောက်ကွယ်တွင်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်, အထူးသ၎င်း၏ဘောင်, အင်ဂျင်, နှင့်တာယာများ. go-kart ၏ဒိုင်းနမစ်သည်နှစ်ဆဖြစ်သည်: ပြိုင်ကားများ၏တိကျခိုင်မာမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းအတွက်ကျောရိုးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်တည်ဆောက်ရန်. များသောအားဖြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်, frames များကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်မဖြစ်ရွေးချယ်စရာရှိသည်. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် frames သည်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းကိုဆိုလိုသည်, ကောင်းသောထိန်းသိမ်းရန်အဖြစ်လှည့်အထူးသဖြင့်အခါ “ဘေးထွက်ကိုက်” နှင့်ကတ်၏ထိန်းချုပ်မှု. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်တဲ့ go-karts တွေမှာပြန်တက်လာတာတွေကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်မရှိဘူး, ဘောင်များသောအားဖြင့်ပိုပြီးအပြစ်ပေးဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်. Sprint Kart တာယာများသည်များသောအားဖြင့်စုတ်တံများမပါရှိပါ, သူတို့ကသဘာဝအပျော့ဖြစ်ကြပြီး All- မြေပြင်အနေအထားပိုမိုသင့်လျော်အဖြစ်. 900 BHP မြင်းကောင်ရေအင်ဂျင်များသည်ဟွန်ဒါဖော်မြူလာ ၀ မ်းတင့်ဇောက်ထိုးများအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. ၏အမြန်နှုန်းရောက်ရှိနိုင်စွမ်း 200+ တစ်နာရီမိုင်, ကာတွန်းနည်းပညာ၏သဘာဝကိုကိုယ်စားပြုသည်. အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအဘို့, ရိုးရှင်းသော 2- သံသရာအင်ဂျင်ပြုလိမ့်မည်! ဓာတ်ဆီအစားဓာတ်ဆီနှင့်လျှပ်စစ်မီးအပေါ်အပြေး (ပုံမှန်အားဖြင့်ဖော်မြူလာတစ်ခုအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီရန်အခြားလောင်စာများနှင့်ရောနှောထားသည်,) Sprint Karts များသည် 2-cycle သို့မဟုတ် 4-cycle engine များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်. 4-သံသရာအင်ဂျင်ပတ်ပတ်လည်အားအနည်းဆုံးအင်ဂျင်ဖြစ်ကြသည်, မြင်းကောင်ရေထိပ်ဆုံးနှင့်အတူ 20 HP. မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောလေဟာနယ်သန့်ရှင်းစက်ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်ကိုစဉ်းစားပါ – ဒါက 4- သံသရာအင်ဂျင်ဘယ်လောက်ပါဝါရှိသည်. 2-သံသရာအင်ဂျင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် Vespas အကြိုက်နှင့်ဆက်စပ်သည် (ဥရောပမော်တာဆိုင်ကယ်) နှင့် mopeds. ဤရွေ့ကားတက် 90 HP. ထည့်သွင်းဆလင်ဒါ (go-karts အတွက်တစ် ဦး ချင်းစီမြင်းကောင်ရေမီးစက်) မြင်းကောင်ရေအားတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်, စင်ကြယ်သောမြန်နှုန်းကိုထည့်သွင်း & သင့်ရဲ့စက်ကိုပါဝါ. ၁၀- ဆလင်ဒါ Formula One kart အင်ဂျင်များနှင့်၎င်း၏မယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများသည်ယခုတွင်သင့်အတွက်ခေါင်းလောင်းသံဖြစ်နိုင်သည်! သင်၏ go-kart အမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်လိုသည်? ဒီမှာပြproblemနာမရှိဘူး! Go-karts တွင်ဂီယာနှင့်အခြေခံဂီယာစနစ်များရှိပြီးအမြန်နှုန်းကိုလိုချင်သောပမာဏအထိထိန်းချုပ်သည်. clutches နှင့်အတူလာမယ့်, shifter karts (လူကြိုက်များသော Sprint Kart အမျိုးအစားကိုသင်အမြန်နှုန်းဖြင့်ရွေ့လျားစေနိုင်သည်) ဖြောင့်သောလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် zipp သို့မဟုတ်အတိုသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်ကွေးကျော် maneuvering သည့်အခါအင်ဂျင်ပါဝါကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုပါ. ဆလင်ဒါနှင့်အင်ဂျင်ပမာဏပေါ် မူတည်၍, shifter ဝါသနာရှင်များသည်၎င်းတို့၏ဖုန်မှုန့်တောက်ပသောလမ်းကြောင်းအထိပြိုင်ဘက်များကိုချထားနိုင်သည် 90 တစ်နာရီမိုင်. Shifter များသည်များသောအားဖြင့်လမ်းပြိုင်ခြင်းဟုလူသိများသည့်ပိုကြီးသည့်လမ်းများပေါ်တွင်ပြေးလေ့ရှိသည်. Kart ၏အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်, ယာဉ်မောင်း၏အလေးချိန်, စသည်တို့. ဟွန်ဒါ, Kawasaki, နှင့် Yamaha သည်လူကြိုက်များသောအင်ဂျင်များဖြစ်သည်. ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီများသည် karting နည်းပညာ၏ရှေ့တန်းမှဖြစ်ကြသည်, ပုံမှန်ရရှိနိုင်မယ့်အရာနှင့်အတူ tinkering သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အသစ်သောသဘောတရားများကိုဖန်တီး. Sprint karting အခွင့်အလမ်းများကိုလူတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်. သင်ကပြိုင်ဆိုင်မှုအစားအပန်းဖြေတစ်ပုံစံအဖြစ်ခံစားချင်လျှင်, သင်၏ဒေသဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းကိုသွားပြီး kart တစ်ခုကိုငှားပါ! မည်သည့်အာမခံစွပ်စွဲချက်ကိုမဆိုလက်မှတ်ထိုးပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါ! သင်ယှဉ်ပြိုင်လိုလျှင်, အတွင်းကနေမေးမြန်းပါ. Sprint Karting သည်ဈေးအကြီးဆုံးအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်. လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးမှစီးပွားရေးနောက်ခံအားလုံးကလူများသည်ကားကိုမောင်းနိုင်သည်, သို့မဟုတ်ပင်အစွမ်းထက်အင်ဂျင်နှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ယူရန်. တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားတွင် karting ကျောင်းများစွာရှိသည်။ သင့်အားသူတို့၏ karts များကိုပုံမှန်သတ်မှတ်ပေးရသည်. အနှစ်သာရအတွက်, ကာတွန်းဟာအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုထက်ပိုတယ်. သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကိုကူညီခြင်းဖြင့်ပိုမိုအဆင့်မြင့်ကာတွန်းရုပ်ပုံများအတွက်သင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်, လက် - မျက်စိညှိနှိုင်းနိုင်စွမ်း, သင်အသုံးပြုနေသောတူရိယာများနှင့်နည်းပညာ၊. Karts သွားပါ – ပြိုင်ပွဲဝါသနာရှင်များဖြစ်လာသည်
ဘာစီလိုနာပရိသတ်များသည်ဒုတိယအကြိမ်ဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသရဖူဆောင်းပြီးနောက်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်, အာဆင်နယ်အသင်းအနေနှင့်လည်းကောင်းမွန်သောအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည့်အချက်ကိုလည်းအာဆင်နယ်အသင်းကငြင်းဆန်ခဲ့သည်. အာဆင်နယ်ဟာအရမ်းကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးကစားပွဲကောင်းတစ်ခုကစားခဲ့ပါတယ်. အာဆင်နယ်ဟာတကယ်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပြီးကစားသမားတစ် ဦး ကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ဖက်ကိုအနိုင်ယူဖို့ပိုခက်ခဲသွားတာကြောင့်ဒီကစားနည်းဟာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မည်သည့်ဘောလုံးအသင်းကိုမဆိုရည်မှန်းချက်ကမျှော်လင့်ချက်ကိုဆိုလိုတယ်၊. Frank Rijkaard, သုံးကြိမ်မြောက်ဥရောပဖလားကို AC Milan နှင့် Ajax Amsterdam အသင်းတို့နောက်ခံလူအဖြစ်ရရှိခဲ့သည်, သူသည်ကစားသမားနှင့်နည်းပြအဖြစ်ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့သည့်ပဉ္စမမြောက်လူဖြစ်လာခဲ့သည်. ဤစာရင်းတွင်သူသည်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နည်းပြ Miguel Munoz နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်, Dutchman Johan Cruyff, နှင့်အီတလီလူမျိုး Giovanni Trapattoni နှင့် Carlo Ancelotti. သူကကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာယခုလက်ရှိခံစားနေမှာသေချာတယ်. အမှန်မှာဘာစီလိုနာသို့တန်းတူဂိုးရပြီးနောက်အခြေအနေများမှာရှုပ်ထွေးပွေလီလှသည်, ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးသည်ကြီးတ ဦး တည်းလျော့နည်းကစားသမားနှင့်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အာဆင်နယ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေဆီကနေ. ၎င်းနောက်တွင်ဘာစီလိုနာသည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အထူးကစားပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်. အာဆင်နယ်အသင်းသည်ကောင်းမွန်သောတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သည်
ကိုယ်ခံပညာသည်အခြေခံအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းသင်ကြားပေးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များဖြစ်သည်, များသောအားဖြင့် '' sensei 'လို့ခေါ်တဲ့သင်တန်းဆရာအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ပွတ်’ ဂျပန်အနုပညာနှင့် ‘sifu သည်’ Yue Chinese ထဲတွင်. ကိုယ်ခံပညာကို 'စစ်အနုပညာ' အဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။, လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းစနစ်များပါ ၀ င်သည်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေးအပေါ်အဓိကထားအာရုံစူးစိုက်. ရှေးခေတ်ဉာဏ်ပညာနှင့်အတွေးအခေါ်အပေါ်အခြေခံသည်, ကိုယ်ခံပညာသည်ကျွမ်းကျင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးရုံသာမကဘဲ, စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်း၊. အရှေ့ယဉ်ကျေးမှု၌တည်၏, မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း, စည်းကမ်း, သည်းခံခြင်း, အသိအမြင်, စစ်မှန်သောစစ်သည်တော်၏စရိုက်လက္ခဏာများဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်, နှင့်ကိုယ်ခံပညာသည်ကျောင်းသားများကိုလေ့ကျင့်ရန်ဤကျွမ်းကျင်မှုများကိုအဓိကထားအာရုံစိုက်သည်. ရှေးခေတ်က, ကိုယ်ခံပညာကိုလျှို့ဝှက်စွာသိမ်းဆည်းထားပြီး၊; ဤအကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အလုပ်သင်ဖြစ်ခြင်းတို့သည်ကြီးစွာသောအခွင့်ထူးဖြစ်ခဲ့သည်. သို့သော်, ယနေ့ခေတ်တွင်ကြီးမားသောရှေးခေတ်သခင်များ၏ရိုးရာသင်ကြားမှုများကိုထိန်းသိမ်းသောကျောင်းများစွာရှိသည်. ကိုယ်ခံပညာများကိုပုံစံအမျိုးမျိုးခွဲခြားထားသည်, အဆိုပါ omnipresent အရှေ့တိုင်းစိတ်ဓာတ်အားဖြင့်အတူတူချိတ်ဆက်. သငျသညျကိုယ်ခံပညာကိုစတင်လေ့ကျင့်လိုလျှင်, သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အလားအလာများကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးမည့်ပုံစံတစ်ခုကိုရွေးချယ်သင့်သည်. အချို့ကိုယ်ခံပညာများသည်ကာယစွမ်းအားကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်, အခြားသူများကို technique ကိုနှင့်တုံ့ပြန်မှုအာရုံစိုက်နေစဉ်. သင့်တော်သောစတိုင်ကိုမရွေးချယ်ခင်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ရန်မှာသင်ခန်းစာအနည်းငယ်ကိုသင်ကြားပေးခြင်းနှင့်သင်လိုက်ဖက်ခြင်းရှိမရှိကိုမေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်. သင်စဉ်းစားသင့်သည့်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာကိုယ်ခံပညာသည်ရည်မှန်းချက်များစွာလိုအပ်သည်, အပ်နှံပွဲ, ဇွဲနှင့်အလေ့အကျင့်. ကျွမ်းကျင်မှုများကိုတဖြည်းဖြည်းသင်ယူတတ်ကြောင်းသင်သတိရသင့်သည်, ထိုသို့အဆင့်မြင့်ရာထူးအောင်မြင်ရန်အချိန်ကြာပါတယ်. သင်အကောင်းဆုံးနှင့်ကိုက်ညီသောစတိုင်ကိုတွေ့သောအခါ, သင်၏သင်တန်းဆရာသည်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းနှင့်သူသည်ချဉ်းကပ်ရလွယ်သောနည်းဖြင့်သင်ကြားပေးရန်သေချာစေပါ. မည်သို့ပင်အတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်ရာထူး, အားလုံးသိုင်းပညာအနုပညာဆရာများသင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်မဟုတ်! သငျသညျစစ်မှန်တဲ့ '' ကုန်ကြမ်းမော်ဒယ် '' အဖြစ်ရပ်တည်သောနည်းပြဆရာကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်, အဘယ်သူ၏သင်ကြားမှုသည်သူ၏စံနမူနာနှင့်ယုံကြည်ချက်ကိုက်ညီပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး. လက်ျာနည်းပြဆရာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံတွေ့ပြီ, သင်လိုအပ်သမျှသည်ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည်. ကိုယ်ခံပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရွေးချယ်နိုင်သောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်အဓိကအားဖြင့်ယူနီဖောင်းသို့မဟုတ် sparring နှင့်လက်ဝှေ့လက်အိတ်ကဲ့သို့သောအကာအကွယ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်, ဦး ခေါင်းဂီယာနှင့်ရင်ဘတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. ဒီအစဉ်အလာယူနီဖောင်းကို ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်သူတို့ကိုသင်လုပ်ပါ. သင့်ရဲ့နည်းပြဆရာနှင့်တိုင်ပင်ပြီးသင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ရေးအဝတ်အစားနှင့်ပတ်သက်။ သူ၏လိုအပ်ချက်များကိုရှာဖွေပါ. အဆိုပါကိုယ်ခံပညာအနုပညာပစ္စည်းကိရိယာများလည်းခါးပတ်ပါဝင်သည်. ၎င်းကိုအထည်အလိပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျောင်းသားများ၏ရာထူးကိုခွဲခြားရန်ဖြစ်သည်. အနက်ရောင်ခါးပတ်သည်အတွေ့အကြုံအမြင့်ဆုံးအမှတ်အသားဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းများမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျအားကစားအဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုယ်ခံပညာကိုလေ့ကျင့်ဖို့ရှေးခယျြခြင်းရှိမရှိ, ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိသိသာသာရှိပါတယ်. ကိုယ်ခံပညာသည်သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုတိုးတက်စေသည်, အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်. သူတို့သည်စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလုံးလုံးလျားလျားအားဖြည့်ပေးပြီးသင့်ကိုလေးစားမှုရှိစေရန်ကူညီသည်, ယုံကြည်မှုနှင့်မျှတမှု. ကိုယ်ခံပညာကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သင်၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခိုင်ခံ့စေပါ